I-Tatraview House ipholile ngemibono emihle yezintaba - I-Airbnb
I-Tatraview House ipholile ngemibono emihle yezintaba
Veľká Lomnica, Prešovský kraj, i-Slovakia
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Jana
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Dis 5.
I-Loft apartment Tatraview house itholakala e-High Tatras eVelka Lomnica. Inzuzo yendawo yokuhlala yindawo emaphakathi. Ibanga elifanayo elingamakhilomitha angu-8 ukuya e-High Tatras - Tatranská Lomnica, Kežmarok nasePoprad.
Indawo yokuhlala ihlinzeka ngobumfihlo obukhulu efulethini elihlukile elinekhishi lalo elihlome ngokuphelele kanye negumbi lokulala elihlukile ku-attic, ukusuka lapho kunombono omuhle we-panorama ye-High Tatras. Ihlanganisa i-WIFI yokugezela yangasese kanye ne-TV.
ubusuku obungu-7 e- Veľká Lomnica
I-Tatraview House itholakala endaweni yomndeni ethule. Idolobhana laseVeľká Lomnica linikeza ingqalasizinda ecebile yezinsizakalo ezivela ezindaweni zokudlela, izindawo zokudlela, ukudla. Indawo ekhanga kakhulu iBlack Storc golf resort. Inzuzo eyinhloko indawo emaphakathi. Ibanga elifanayo amakhilomitha angu-8 ukuya e-Tatranská Lomnica, Kežmarok, Poprad kanye nedamu lokubhukuda elishisayo i-Vrbov.Into entsha yindlela entsha yomjikelezo ka-2021, ekopisha i-panorama ye-High Tatras. Ixhuma i-Veľká Lomnica nge-Kežmarok, i-Strážky ne-Tatranská Kotlina.Indawo yokuhlala efanelekayo yabathandi bamabhayisikili kanye nethuba lokugcinwa okuphephile kwamabhayisikili.
Hlola ezinye izinketho ezise- Veľká Lomnica namaphethelo